နှစ်သစ်တွင် သင့် ရဲ့ငွေကြေးကဏ္ဍတိုးတက်ရန်ဘယ်လိုလုပ်မလဲ..? ~ လူဗိုလ် ဟူသည် ...
နှစ်သစ်တွင် သင့် ရဲ့ငွေကြေးကဏ္ဍတိုးတက်ရန်ဘယ်လိုလုပ်မလဲ..?
ယခုဆောင်းပါးသည် သင့်ဘ၀တိုးတက်ရေးအတွက် အရေးပါသော ငွေကြေးကဏ္ဍကို တစ်နည်းတစ်ဖုံ အထောက်အကူပြုလိမ့် မည် ဟုယုံကြည်မိပါသည်။ ကျွန်တော် ရဲ့New Year လက်ဆောင် Calculator ကို အောက်တွင်ညွန်ကြားထားသည့် အတိုင်း free Download ရယူပါ။
နှစ်သစ်မှာ သင့် ဘ၀အတွက် ငွေကြေးကဏ္ဍတိုးတက်ရန် လုပ်ဆောင်ရန် အချက် 8 ချက်ရှိပါတယ်...
1.What is my Net worth?
သင့်တွင် ယနေ့ ပိုင်ဆိုင်မှူ တန်ဖိုး မည် ရွေ့ မည် မျှ၇ှိသည် ကိုပထမဆုံးတွက်ချက်ရန်ဖြစ်သည်။ ခရီးတစ်ခုသို့ မသွားမှီသင် ဘယ်ရောက်နေသည် ကို အရင်သိရမည် မဟုတ်ပါလား၊ သို့ မှသာ အရှေ့သို့ သွားမည် အနောက်သို့ သွားမည် ၊ မည် ရွေ့ မည်မျှသွားမည် တို့ ကို သိမည် ဖြစ်သကဲ့သို့ ဤနှစ်သစ်တွင် သင်ပထမဆုံးလုပ်ဆောင်ရမည့် အချက်မှာ သင်တွင် ယခုလက်ရှိ မည်မျှပိုင်ဆိုင်မှူ ရှိသနည်း ဟုတွက်ရန်ဖြစ်သည်။ ထိုသို့ တွက်ရန် သင့် တွင်ရှိသော ငွေ ပမာဏ၊ ပစ္စည်းပိုင်ဆိုင်မှူ ၏ငွေကြေး ပမာဏ တို့ အားလုံးပေါင်း၍ သင်ပေးရန် ကြွေးပမာဏကို နုတ်လျင် သင် ၏ ယနေ့ လက်ရှိပိုင်ဆိုင်မှူ ပမာဏ ကိုရသည်။
2. Createarecord keeping system for your expense
ယနေ့ မှစ၍ သင်ရဲ့ အသုံးစားရိတ်များကို စာအုပ်တစ်ခု တွင် မှတ်သားရန်ဖြစ်သည်။ ဘောပင်တစ်ချောင်းနှင့် မှတ်စုစာအုပ်လေးတစ်အုပ်ကို အမြဲဆောင်ထားပါ။
3. Define my financial Goals
တတိယအဆင့် မှာ သင့် ရဲ့ ငွေကြေးလိုအပ်ချက်ကိုတိုင်းတာရန်ဖြစ်သည်။ သင်ငွေကြေးချမ်းသာအောင်မြင်လိုသည် ဆိုပါက ဘယ်၍ဘယ်မျှ ကို ဘယ် အချိန်မှာ ရအောင် လုပ်မယ် ဆိုတာကို တိတိကျကျ ချရေးပါ။
4. Analyst my cash flow, where money come from and go.
ယခု လက်ရှိ သင့် ရဲ့ ငွေဝင်လမ်းကြောင်းကို ပြန်လည် သုံးသပ်ပါ။ သင့် ဆီကို ငွေများဘယ် လို ၀င်လာသလဲ၊ ဘယ် လို ထွက်သွားသလဲ စသည် တို့ ကို ပြန်လည်သုံးသပ်စီစစ်ပါ။ ကုမ္မဏီလခစားဆိုပါက ငွေပိုဝင်အောင် ဘယ်လို ပညာရေးမျိူးကို ငါ ဒီနှစ် ကြိူးစားမလဲ၊ စီးပွားရေးသမားဆိုပါက လည်း ဘယ်လို စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတိုးချဲ့ မှူမျိူး၊ ဘယ်လို မိတ်ဆွေ အတိုင်းအ၀ိုင်းမျိူး ရအောင်လုပ်မည် စသည် ဖြင့် cash flow လမ်းကြောင်း ကိုတိုးချဲ့ ပါ။
ဒီနှစ်အတွက် ဘက်ဂျက်ကို လျာထားပါ။ အစားအသောက်အတွက် ငါ တစ်လလျင်ဘယ်လောက်သုံးမည်၊ အ၀တ်အစားအတွက် ဘယ်လောက်သုံးမည်၊ အပန်းဖြေ၊ ရုပ်ရှင်ကြည့် ၊ စာအုပ်ဝယ် ၊ ခရီးသွား စသည် တို့ အတွက် ဘယ်လောက်သုံးမည် စသည် ဖြင့် ငွေပမာဏကို သတ်မှတ်လျာထားရန်ဖြစ်သည်။
6.Assemblealong-term financial plan
သင် လိုအပ်သောပညာရေးသင်ကြားရန်ငွေဘယ်လောက်လို၊ မိသားစု မောင်နှမ များကို ထောက်ပံရန်ငွေဘယ်လောက်လို၊ သင်၏အောင်မြင်မှူ အတွက်လိုအပ်သောငွေပမာဏ၊ စသည်ဖြင့် သင် ရေရှည် တွင် လိုအပ်မည့် ငွေကြေးပမာဏကို တွက်ချက်၍ တစ်လလျင် နည်းနည်း ဘယ်လောက်ရှာမည် စသည် တို့ ကို စဉ်းစား plan ဆွဲပါ။
သင် သည် အသက် 20-30 ၀န်းကျင်ဆိုပါက သင့် တွင်ရှိသော ငွေအားလုံးကို ပုံအော၍ စီးပွားရေးလုပ်လို့ ရသည်။ ရှူံးပါက ပြန်လည် ရှာဖွေရှူန်းကန်ရန်ဖို့ အချိန်အလုံအလောက်ရှိသည်။ သို့ သော် 50-60 ဆိုပါ က ရှူံးလျင် ပြန်နလံထရန်အချိန်အလောက်မရှိသောကြောင့် Risk ( စွန့်စားမှူ ) များသော လုပ်ငန်းများကို ရှောင်ရမည်။ သင်အသက် နှင့်Knowledge ပေါ်လိုက်၍ သင် ရဲ့ Risk အနည်း အများ level ကိုတွက်ချက်ရမည်။ သို့ မှသာ အသက်ကြီးသော်လည်း မြောင်းချိူမြောင်းကြား၊ ကျောင်းကြိုကျောင်းကြား၊ ဇရပ်ကြိုဇရပ်ကြားသို့ မရောက်ပဲ ရှိသောငွေနှင့် တင့်ကောင်းတင့်တယ် နေနိုင်မည်ဖြစ်သည်။
8.Use technology for your financial planning
သင့်ရဲ့ financial planning မှာ technology နည်းပညာများအသုံးပြုပါ။ ယနေ့ နောက် ဆုံးပေါ်နည်းပညာများသည် လူသားတစ်ဦး၏ ဦးနှောက်နှင့် တွက် ရန်ခက်ခဲ သော တွက်ချက်မှူများကို စက္ကန့် အတွင်းမှာပင် တွက်၍ သင့် ရဲ့ ဆုံးဖြတ်မှူများမှန်ကန်အောင် ကူညီပေးနိင်သည် ။ ဥပမာ သင် က ယခုအသက် 28နှစ် ၊ အသက် 60 ပြည့် တာနဲ့ အလုပ်မလုပ် တော့ပဲ အေးအေးချမ်းချမ်း အငြိမ်းစားယူ ချင်တယ်ဆိုပါစို့ ။ ယခုအသက် 28နှစ် မှာ သင် သိန်း 20 ကို သင် က အတိုးနန်း 20% ရတဲ့ ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှူ တစ်ခုမှာထဲ့ ထားပြီး တစ်လ ကို 1သိန်းပုံမှန်စုသွားမယ် ဆိုလျင် သင်အငြိမ်းစားယူတာနဲ့ သိန်းပေါင်း 27,286 (သုံးသောင်းနှီးပါး ) ကို ရရှိပြီးသင့်ဘ၀တစ်သက်လုံး အေးအေးချမ်းချမ်းနေသွားနိင်ပြီဟုကျွန်တော် ဆိုလျင်သင်လက်ခံမည်လား။ Retirement calculator တစ်ခု ကို htiaung.com မှာ ကျွန်တော့ ရဲ့ New Year လက်ဆောင်အဖြစ်ရယူပါ။
excel program အသုံးပြုထားတဲ့ စုငွေတွက် တဲ့ calculator ပါ။ download ပြီးကိုယ့် ရဲ့ လက်ရှိအသက်နဲ့ တွက် ကြည့် ပါ။ မိသားစု၊မောင်နှမသားချင်းများ နှင့် သူငယ်ချင်းများကို လဲ အံသြသွားလောက်အောင် ကူညီတွက်ချက်ပေးလိုက်ပါ။ နှစ်သစ်မှာ ငွေကြေးအသိပညာတိုးပါစေ ဟုဆန္ဒပြုရင်း ။
Business Management Investment Finance (BYU-H)